Ubunewunewu obutofotofo - bufanelekile ngesauna entliziyweni yeTartu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAiri
Indawo yam epholileyo, neyothando ibekwe kumbindi weTartu, kunxweme lomlambo i-Emajõgi. Zonke iindawo ezibonwayo zesixeko, imivalo / iikhefi kunye neeresityu ziphakathi kohambo lwemizuzu emi-5 ukuya kweli-10.
Indlu yokonga amandla kwaye yakhiwa ngo-2020. Unendlu ye-60 m2 kwimigangatho emi-2 kunye ne-sauna kunye ne-balcony. Ikhitshi kunye negumbi lokulala 1st floor kunye ne-sauna enegumbi lokuphumla lothando kumgangatho we-2. I-Apartment ikwi-1st floor yesakhiwo.
Kwigumbi lokuhlala kukho i-smart TV eneetshaneli ezininzi, i-sofa ye-1 apho umntu unokuvulwa kwaye unokwanela ngokufanelekileyo abantu aba-2 abongezelelweyo ukuba bayafuneka.
Ikhitshi elivulekileyo linayo yonke into oyifunayo ukuyila isidlo segourmet. Phezulu kwezixhobo zombane: ifriji, isitofu, i-microwave, i-kettle yamanzi, i-kitchenware kunye nokunye.
Kwigumbi lokulala kukho ibhedi edibeneyo kunye ne-mattress ekhululekile kunye nemithwalo ephezulu kunye nelinen.
Kwigumbi lokuhlambela kunye ne-sauna kukho izinto zangasese zasimahla kwaye ngokuqinisekileyo ucoce iitawuli kunye nesomisi seenwele onakho. Kwakhona umatshini wokuhlamba ngesomisi, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina.
Umbuki zindwendwe ngu- Airi